Lock ကျသွားသာ Facebook အကောင့်ကို ပြန်လည် ရယူနည်း ~ YGNBlogger
19:01 Security No comments
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေမေးနေခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်လည်း Facebook မကိုင်တော့ အတွေ့အကြုံက သိပ်မရှိပါဘူး။ ခုတော့ အနာရှိရင် ဆေးရှိတယ်လေ။ ကိုမင်းစိုးရာဇာဆီက ကူးတာပါ။ သိစေချင်လို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အောက်ပါအတိုင်းသေချာဖတ်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော် ခေါင်းစဉ်လေးပဲပြင်ထားပါတယ်။
ဘာကြောင့် မိမိ၏ Facebook အကောင့် Lock ကျသွားပါသလဲ?
မိမိ၏ Facebook အကောင့် Lock ကျနေစဉ် မလုပ်သင့်သော အရာများ (Don't!)
Facebook Account Lock ကျရင် ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းမလဲ? ဘယ်လိုမျိုးများ သတိထားသင့်သလဲ?
Facebook Account ပြန်လည်ရပြီးရင် သတိထားဖို့...!?
ဘယ်လိုအကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Facebook Account Lock ကျသလဲ?
လက်တလော Facebook မှာ Policy ခဏခဏ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ်သတင်းတွေထဲမှာ Facebook တွင် အကောင့်အတုပေါင်း သန်း ၈၀ ကျော်ရှိတယ်လို့လည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Spam အကောင့်အတွက် Facebook account အသစ်လုပ်နေတဲ့သူရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Facebook ဟာ အကောင့်အတု များကို ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Facebook အသုံးပြုသူများ အထက်ပါ အချက်များကို သိစေလိုပါတယ်ဗျာ။
Credit : minsoeyarsar.com
Edited : pyae-phyo.blogspot.com